musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » International Contemporary Art Fair muKyoto
Nzvimbo huru yeACK: Kyoto International Conference Center (ICC Kyoto)
Ichangobva kutangwa pasi pedingindira re "Contemporary Art and Cooperation," Art Collaboration Kyoto (ACK) rudzi rutsva rweunyanzvi hwakaitwa kekutanga muKyoto Prefecture. Ndiyo imwe yemitambo mikuru muJapan yakatsaurirwa kune yemazuva ano art uye ichaitika pa Kyoto International Musangano Wenzvimbo kubva munaNovember 5 kusvika 7 inomiririra pamusoro pe50 gallery kubva kuJapan, Asia, Europe uye zvese zviri zviviri North neSouth America.
ACK inosimbisa marudzi mana ekubatana. Imwe kushandira pamwe pakati pemagaraji eJapan nemhiri kwemakungwa. Magaraji echiJapan anogona kupa kugovera nzvimbo yekutandarira nemakamuri ekumhiri kwemakungwa avari kusangana nawo. Nenzira iyi, maitiro epasirese epasirese anogona kujekeswa uku panguva imwechete achipa maJapan maartist kuratidzwa kune dzimwe nyika. Imwe iri pakati pevehurumende nevemapato akazvimirira. Kubatanidzwa kwehurumende kunobatsira mukudzikisa mari dzinowanzokwira dzakabatanidzwa nemitambo yemitambo, ukuwo kutora chikamu kwebazi rakazvimiririra kunovimbisa hunyanzvi mukuunza kutariswa uye kukoshesa maartist anoratidzwa. Rudzi rwechitatu rwekubatana rwakagadzirwa neACK runoratidzwa mu ACK's 'joint director' system iyo yakakosha pakuzadzikiswa kwemhando yepamusoro art fair. Chekupedzisira, kutora mukana wekuunganidzwa kweazvino nyanzvi dzehunyanzvi, kubatana kutsva mune mamwe minda, senge dhijitari tekinoroji kana maindasitiri maapplication, anogona kutarisirwa.
Iyo ACK art fair venue icharongwa muzvikamu zviviri - Gallery Collaborations, ine 22 Japan based host galleries uye 23 yavo yevaenzi mhiri kwemakungwa based galleries, uye Kyoto Meetings, yakanangana ne9 maberere ari kuratidza Kyoto affiliated artists. Pamusoro pezvo, ACK ichabata Beyond Kyoto munzvimbo yemahara paKyoto International Conference Center main fair venue uye Kyoto Inotevera pamhepo kusimbisa mikana yekuburitsa ruzivo nezveKyoto yemazuva ano art mhiri kwemakungwa. Kyoto art, kubva kumhizha kusvika kune yemazuva ano, iri kuratidzwa mune zvimwe zvirongwa zvakaita se Alternative Kyoto 2021, mutambo wehunyanzvi wakarongwa neKyoto Prefecture uri kuitirwa munzvimbo dzakasiyana muKyoto Prefecture, uye zviitiko zvakaitirwa kutenderera Kyoto City.
ACK yakamiswa nekuda kweCOVID-19 denda. Iko zvino ichaitwa nematanho akazara munzvimbo kudzivirira kutapukirwa. Kana magaraji evaenzi akanetseka kuenda kuJapan nekuda kwezvirambidzo zvine chekuita neCCIDID, magaraji evaenzi achaita gadziriro uye kuratidza mabasa avo emifananidzo, achivimbisa magaraji evaenzi kuvapo kuACK. Nzvimbo yedhijitari inogonesawo kuwanikwa kwepamhepo kuACK.